Microsoft mandefa ny MySpace ... Spaces ... er ... Error | Martech Zone
Alarobia 2, 2006 Alatsinainy, Aogositra 24, 2009 Douglas Karr
Nahazo ity lesoka manaraka ity aho raha tsindrio ny bokotra Fikarohana manerana ny endrika karoka ambony ao amin'ny Microsoft Spaces ao Mozilla Firefox:
Fitsipika momba ny ampihimamba Internet:
Tsy mila maka tahaka ianao, manana vola ampy ianao hividianana azy ireo ary hanavotana ny fahadisoam-panantenan'ny tsirairay.
Aza adino fa misy mpizaha hafa any, tena misy! Adinonao sahady ve ireo fitoriana ireo?
Manana vola ampy ianao hamoronana zavatra hafa. Manaova # 1 na manaova zavatra hafa.
2 Aogositra 2006 amin'ny 8:17 PM
Andramo apetraka ny rafitra .net, miankina aminao ny olana Heveriko.
2 Aogositra 2006 amin'ny 8:30 PM
Tena nahazo ny rafitra .NET feno entana aho. Tena mivoatra amin'ny .NET aho. Raha izany tokoa, ny olana, dia mirindra tsara kokoa ny hafatra diso. Na angamba script izay manandrana ny rafitra alohan'ny hametrahana ilay pejy.
Hanandrana indray aho afaka roa andro.
2 Aogositra 2006 amin'ny 9:30 PM
rehefa mandefa habaka.live.com aho dia tsy mahita rohy SEARCH. Angamba nesorin'izy ireo tamin'ny fanamboarana izany?
Na izany na tsy izany, nitory an'ity bibikely ity tamin'izy ireo toa olona tompon'andraikitra ve ianao? Tsy isalasalana fa ny ekipan'i Microsoft mamaky ity bilaogy ity.
2 Aogositra 2006 amin'ny 10:05 PM
Tsia, tsy nitory an'ity bibikely ity tany amin'i Microsoft aho. Tsy mino aho fa ny mpampiasa farany ny vokatra lozisialy dia tokony ho olona tompon'andraikitra amin'ny tatitra bibikely. Mino aho amin'ny programa fanandramana matanjaka sy antoka. Raha ny tombom-barotra azon'i Microsoft dia mino aho fa afaka mizaka izany i Microsoft.
Izany dia nilaza, tokony hilaza mazava aho fa tsy "Microsoft Basher". Raha Yahoo io!, Mety ho nandefa ny hafatra marina ihany koa aho.
Raha loharanom-baovao misokatra izy io, dia ho notateriko toy ny 'olona tompon'andraikitra' ilay bibikely.